Isexwayiso: Bangase baboshwe o-admin bakaWhatsApp eMzansi | News24
Isexwayiso: Bangase baboshwe o-admin bakaWhatsApp eMzansi
LABO abango-admin bama-group kaWhatsApp eNingizimu Afrika bangase babhekane nejele ngezinto ezehlisa isithunzi ezibhalwa kulama-group. Lokhu kungemuva kokuboshwa komunye obengumlawuli (administrator) ye-group e-India ngesonto eledlule.
UWhatsApp usanda kuba sematheni ngemuva kokuthi kuboshwe u-administrator we-group yayo ngenxa yesithombe esehlisa isithunzi sikaNdunankulu waseNdiya, uNarendra Modi, nesadluliswa elinye ilungu le-group, ngokombiko weHindustan Times ngoMeyi.
Leli cala seliqubule enkulu inkulumompikiswano eNingizimu Afrika mayelana nokuthi labo abango-admin baWhatsApp bangajeziswa ngezinto ezehlisa isithunzi ezifakwa khona noma ngabe azifakwanga uyena qobo lo ongu-admin we-group.
Akukacaci noma izinkantolo zaseNingizimu Afrika zizohamba esinyathelweni esifanayo yini nesale nkantolo yase-India, ngokuchaza kukaSimon Colman, oyi-Executive Head of Digital Distribution eStalker Hutchison Admiral, nokuyinkampani engaphansi kukaSantam. “Kodwa-ke izinkantolo zakuleli maningi amathuba okuthelelwa okwenzeka emhlabeni mayelana nokujeziswa ezinkundleni zokuxhumana,” etshela iFin24.
Izinkampani zemishwalense eNingizimu Afrika seziqalile ukusebenzisa imigomo yezinkundla zokuxhumana, kusho uColman.
Uthi sekube nokunyuka kwamacala okwehlisa isithunzi , ikakhulukazi kuFacebook eNingizimu Afrika.
UColman uxwayise ngokuthi amanye ama-group aWhatsApp asemakhulu ngale ndlela yokuthi agcina eselahlekelwa ukuba yinto yangasese kwawo bese egcina eseyinkundla yomphakathi. Ngalokho, abantu bangajeziswa ngokuphawula kwabo.